Kala duwanaanshaha Lambda: Tallaalka iska caabbiyaa oo faafa?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Kala duwanaanshaha Lambda: Tallaalka iska caabbiyaa oo faafa?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Chile • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
COVID-19 Kala duwan
Lambda Variant-ka ee COVID-19 wuxuu aad ugu fiicnaan karaa tallaabada Delta Variant ee hadda, oo lagu tuhunsan yahay inuu sababay isbeddel xagga gudbinta ama uu keeno cudur aad u daran.
Si kastaba ha ahaatee weli waxaa ku socda baaritaan. Daraasadaha shaybaarku waxay muujinayaan inay leedahay isku-beddello ka hortaga unugyada difaaca jirka ee tallaalka.
Kala duwanaanshaha Lambda ayaa soo jiitay dareen ah inuu yahay halis cusub oo ka dhalan karta horumarinta masiibada COVID-19
Kala duwanaanshaha Lambda ee coronavirus, oo markii ugu horreysay lagu aqoonsaday Peru bishii Diseembar, ayaa laga yaabaa inuu dib u laabto, laakiin wuxuu kaloo fursad u leeyahay inuu keeno cudur aad u daran haddii aan la joojin. Kiisaska waxaa laga helay Texas iyo South Carolina, iyo 81% kiisaska laga helay Peru.
Kala duwanaanshaha Lambda wuxuu leeyahay isku -beddello ka soo horjeeda tallaalka.
Laba is -beddel oo ku jira kala -duwanaanshaha Lambda -T76I iyo L452Q -ayaa ka dhigaya mid ka sii faafa marka loo eego kala duwanaanshaha COVID ee adduunka ku faafay 2020
Gabagabadii daraasaddu waxay la jaanqaadday natiijooyinka koox ka tirsan Chile oo ogaatay in kala duwanaantu ay sidoo kale ka fogaan karto unugyada difaaca jirka, Xakamaynta Infekshanka Chile ayaa werisay.
Warbixintaan weli dib -u -eegis kuma sameyn asaaggi
Kala duwanaansho COVID-19 oo caddeeya inuu u adkaysan karo tallaallada ayaa khubarada caafimaadka, saraakiisha caafimaadka dadweynaha, iyo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka safka hore ee masiibada COVID-19 habeenkii.
Waa maxay kala duwanaanshaha Lambda marka loo eego daraasad laga sameeyay Chile?
Background Qabiilka cusub ee SARS-CoV-2 ee C.37 ayaa dhowaan lagu sifeeyay inuu yahay kala duwanaansho kala duwanaansho ah oo ay samaysay WHO (Lambda variant) oo ku salaysan heerka wareegga sare ee dalalka Koonfurta Ameerika iyo joogitaanka is-beddellada muhiimka ah ee borotiinka kororka. Saamaynta is -beddellada noocan ahi ku yeelan karaan caabuqa iyo ka -baxsashada difaaca ee ka -hortagga unugyada difaaca jirka gebi ahaanba lama yaqaan.
Dariiqooyinka Waxaan samaynay tijaabin dhexdhexaad ah oo fayras been abuur ah waxaana go'aaminnay saameynta Lambda kala duwanaanshaha infekshanka iyo baxsashada difaaca iyadoo la adeegsanayo shaybaarada plasma ee shaqaalaha daryeelka caafimaadka (HCW) oo laga keenay laba xarumood oo ku yaal Santiago, Chile kuwaas oo qaatay laba-qiyaasood oo ah tallaalka fayraska aan firfircoonayn ee CoronaVac.
Waxaan aragnay infekshanka oo kordhay oo ay dhexdhexaadisay borotiinka Lambda spike oo xitaa ka sarreeya kan D614G (nasabka B) ama noocyada Alpha iyo Gamma. Marka la barbardhigo nooca Duur-joogta (nasabka A), dhex-dhexaadnimadu waxay hoos u dhacday 3.05-laab ee kala duwanaanshaha Lambda halka ay 2.33-laab u ahayd kala duwanaanshaha Gamma iyo 2.03-laab ee kala duwanaanshaha Alpha.
Gabagabada Natiijooyinkayagu waxay muujinayaan in is -beddellada ku jira borotiinka kororka ee Lambda kala duwanaanshaha xiisaha ay kordhiso caabuqa iyo ka -baxsashada difaaca ee ka -hortagga unugyada difaaca jirka ee uu keenay CoronaVac. Xogtan ayaa xoojinaysa fikradda ah in ololeyaal tallaal oo ballaaran laga sameeyo waddammada leh wareegga SARS-CoV-2 sare waa inay la socdaan ilaalin hidde ah oo u oggolaanaysa aqoonsiga go'doominta cusub ee sidda is-beddelka kororka iyo daraasaadka tallaalka difaaca oo loogu talagalay in lagu go'aamiyo saameynta is-beddelladaan ee baxsashada difaaca iyo tallaalku waa horumar.
Soo bixitaanka SARS-CoV-2 kala duwanaanshaha walaaca iyo kala duwanaanshaha xiisaha ayaa astaan ​​u ahaa masiibada COVID-19 intii lagu jiray 2021.
Qadka cusub ee SARS-CoV-2 ee loo xilsaaray C.37 ayaa dhowaan WHO ay u aqoonsatay inay tahay dano kala duwan 14-kii Juunth waxaana loo aqoonsaday kala duwanaanshaha Lambda. Jiritaanka noocyadan cusub ayaa laga soo sheegay in ka badan 20 waddan sida Juun 2021 iyadoo inta badan taxanaha la heli karo ay ka imanayaan waddamada Koonfurta Ameerika, gaar ahaan Chile, Peru, Ecuador iyo Argentina5. Kala duwanaanshahan cusub ee xiisaha leh waxaa lagu gartaa joogitaanka tirtirid isku-dhafan ee hidda-wadaha ORF1a (Δ3675-3677) oo hore loogu sharraxay noocyada Beta iyo Gamma ee welwelka iyo is-beddellada Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, T859N barootiin dheellitiran6. Saamaynta is -beddellada kororka ah ee ku yeelashada caabuqa iyo u -baxsashada ka -hortagga unugyada difaaca jirka gebi ahaanba lama yaqaan.
Chile ayaa hadda ku jirta barnaamij tallaal oo aad u ballaaran. Marka loo eego xogta dadweynaha ee Wasaaradda Caafimaadka ee Chile illaa iyo Juun 27th 2021, 65.6% dadkii loogu talagalay (18 jir iyo ka weyn) ayaa qaatay qorshe tallaal oo dhammaystiran7. Tirada ugu badan (78.2%) ee dadka si buuxda loo tallaalay waxay heleen labada qiyaasood ee tallaalka fayraska aan firfircoonayn ee CoronaVac, kaas oo hore loo soo sheegay inuu kicinayo ka -hortagga unugyada difaaca jirka laakiin qandhada hoose marka la barbar dhigo plasma ama sera shaqsiyaadka isku dhafan.
Halkan, waxaan ku adeegsanay qiimaynta dhex -dhexaadnimada fayraska aan hore loo sifeyn12 si loo go'aamiyo saamaynta kala duwanaanshaha Lambda ee jawaab -celinta unugyada difaaca jirka ee uu keenay tallaalka fayraska aan firfircoonayn ee CoronaVac. Xogtayadu waxay muujineysaa in is -beddellada ku jira borotiinka xawliga ah ee kala duwanaanshaha Lambda ay sii kordhiyaan caabuqa oo ay u baxsadaan inay ka takhalusaan unugyada difaaca jirka ee uu keenay tallaalka fayraska aan firfircoonayn ee CoronaVac.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo ka kala yimid laba goobood oo ku yaal Santiago, Chile ayaa lagu casuumay inay ka qaybgalaan. Tabaruceyaashu waxay heleen qorshaha laba-qiyaasood ee CoronaVac, qiyaas kasta waxaa la maamulaa 28 maalmood marka loo eego barnaamijka tallaalka ee Chile. Saamiyada Plasma ayaa la ururiyay intii u dhaxaysay May iyo Juun 2021. Dhammaan ka qaybgalayaashu waxay saxeexeen oggolaansho xog -ogaal ah ka hor inta aan la samayn habraac waxbarasho.